भाग्यमानी छोरो – Part 32 – अलैंचीबारी3– Naughty Nepali
Home » Hindi Sex Stories » भाग्यमानी छोरो – Part 32 – अलैंचीबारी 3
भाग्यमानी छोरो – Part 32 – अलैंचीबारी 3
Hindi Sex Stories, Nepali Sex Stories
यति गफ गर्दै गर्दा मैले आमाको चाकमा लाँडोको टुप्पो छिराइसकेको थिएँ, र मैले चाकभित्रै लाँडो हुँदाहुँदै फेरी मुखभरीको थुक आमाको चाकको प्वालमा पर्नेगरि खसालेर लाँडोलाई हल्कासँग अघि-पछी गराउन थालें र भनें “लौ आमा, मेरो लाँडो हजुरको चाकभित्र रमाउँदै छ ! गाह्रो भयो त ?” “अँ गाह्रो त होईन अर्कै कस्तो कस्तो खाले अनुभव भईरहेछ ।“ मैले आमाको चाकमा लाँडोको धक्का अरु बढाउन थालें घोडाले घोडीलाई चिकेझैं । आमाले पनि मलाई आफ्नै हिसाबले साथ दिईरहनुभयो । पछाडीबाट चिकेर थकाई लागेपछी मैले आफू र आमालाई सँगै पल्टाएर भुईंमा तेर्सोपरी पछाडीबाट लाँडोले चिक्दै रहें, निकैबेरसम्म आमाको चाकमा चिकेपछी मैले आमाको चाकबाट लाँडो निकालेर आमालाई आफूतिर फर्काएर किस गर्दै भनें “मजा आयो कि आएन त बुढीमाउ !” “चाकमा चिकाउँदा अर्कै खालको मजा हुँदो रै’छ नि ? यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए तेरो बाउसँग मैले पहिले नै चिकाउँथे नि !” “बुढिमाउ ! हजुरले बुबासँग पहिल्यै गरेको भए त मेरो लाँडो कहाँ चाख्न पाउनुहुन्थ्यो त ? अब त हजुरलाई म र बुबा मिलेर घरैमा दुईतिरबाट चिक्ने हो अनि बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ बुढेसकालको जवानी कस्तो हुन्छ ?” मैले आमाको पुतीमा लाँडो छिराएर चिक्दै गरें “अनि दार्जिलिङ्गमा तेरो साथीसँग घुम्न गएपछी त मलाई कसरी चिक्छस् त ?”
“आमा पनि ! तपाईं हुन्छ मात्र भन्नु न, विकेश र मैले उसको आमालाई चिकेजस्तै गरी हजुरलाई पनि दुईतिरको मजा दिउँला नि ?” “छ्या ! म जो पायो त्यहिसँग चिकाउँदिन ? पर्*याछैन मलाई भालू बन्न !” “त्यसोभए म तपाईंलाई चिक्छु विकेशले विकेशको आमालाई चिक्छ नि त के भो र ?” “ल ल !” म उत्तानो परें र आमा मेरो लाँडोमाथी आफैं मच्चिन थाल्नुभयो । हाम्रो अलैंचीबारी आमा-छोराको चिकाईको आवाजले गुञ्जायमान भयो । निकैबेरसम्म आमा र मेरो चिकाई खुला आकाशमुनि चलिरह्यो र अन्तमा मैले आमाको मुखभरी फुसी बनाईदिएँ । आमाको मुखभरी फुसी भएपछी पनि आमाले मेरो लाँडो चुस्दै रहनुभयो । आमाले कपडा लगाउन खोज्दै भन्नुभयो “हिंड ऊ त्यहाँ खोल्सामा पानी छ पखाल्नुपर्*यो !” मैले आमाको कपडा समातेर भनें “किन त्यहाँ पुग्नु म सफा गरिदिईहाल्छु नि !” अनि आमाको अनुहारमा मुख दल्दै फुसी मुखमा सोहोरेर सफा गरिदिँए त्यसपछि मुखभरीको फुसीलाई फेरी आमाको मुखमा ट्रान्सफर गर्दै भनें “यो त भिटामिन पो हो त ? निल्नुस् !” आमाले खुरुक्क फुसी निल्नुभयो घुटुक्क गर्दै । त्यसपछी हामीले कपडा लगायौं र अरु जग्गा हेर्नका लागि हिड्यौं ।
साँझ सानीआमाको घर पुग्दा अध्येरों हुन थालिसकेको थियो, सानीआमाले सोध्नुभयो “निकै ढिला गर्*यौं त आमा-छोराले ?” मैले सानीआमाले देख्ने गरि लाँडो सुमसुम्याउँदै भनें “यसो खुला आकाशमुनि आमालाई नयाँ तरिकाले मजा दिएको नि !” सानीआमा हाँस्दै भन्नुभयो “लाज पनि छैन मोरोलाई !” मैले सानीआमाको चाकमा हातले समाएर छोड्दै भनें “हजुरहरु हुनुहुन्छ नै त्यस्तै मनले मान्दै मान्दैन !” “हेर न पात्तेको ! छोड् मेरो…” मैले सानीआमाको पुठ्ठालाई फेरी समाएर हल्लाउँदै खेलाएर भनें “हजुरको के सानीआमा ?” “हेर्नु न दिदी यो महेन्द्र मसँग छिल्लिँदै छ !” “के नाटक गर्छेस् अहिले राती राती भएजति प्वालमा निम्त्याउँछेस् !” सानीआमा रातै हुनुभयो, मैले सानीआमाको पोकालाई हातले समाएर खेलाउँदै भनें “अब फेरी कहिले हो कहिले आज राती त हजुरलाई धित् मर्नेगरी चिक्छु!” आमाले सानीआमाको पोकाबाट मेरो हात हटाईदिदैं भन्नुभयो “ल ल छोड्दे अहिले खाना खाउँ पहिला !” म फेरी आमातिर फर्केर आमाको पोका समाउँदै भनें “बुढीमाउलाई सौता लाग्यो भन्ने पीर हो की दिदी-बहिनी सँगै मिलेर छोराको लाँडो चाख्ने रहर हो ?” अनि पेन्टबाट लाँडो निकालेर सानीआमाको हातमा थमाईदिएँ “आबुई !” भन्दै सानीआमाले मेरो लाँडो हातबाट छोड्नुभयो ।
chikeko katha, chikeko katha nepali, chiyabari ma chikeko, erotic story nepali, inscest sex story, inscest story, iscest nepali sex story, lado chusi, lado puti ma, lado puti ma chikeko story, naango boobs, nepali erotic story, nepali inscest story, nepali puti, nepali puti chikeko, nepali sex story, Pallo Ghar Ko Neha Le Lado Chusi, puti chikeko, Stories chak chikeko katha
भाग्यमानी छोरो – Part 31 – अलैंचीबारी 2
भाग्यमानी छोरो – Part 33 – अलैंचीबारी 4